Kuyini coleitis futhi indlela yokuphatha kulo
Kuyini coleitis? Lesi sifo izifo zabesifazane we mucosa lwesitho sangasese sowesifazane. Ngokuvamile kwenzeka ngokumelene okwenza izinguquko kule microflora e sangasese noma ngokuqondene izinqubo ukuvuvukala. Lesi sifo ubizwa nangokuthi vulvovaginitis futhi ngemomozi yakho. Okwamthinta abesifazane iningi lawo kungabazalwane abasebasha yokuzala.
owesifazane enempilo flora lwesitho sangasese sowesifazane siqukethe Doderlein inamathela ngabo senzeka acidosis acid, okuyinto kunomthelela omubi kakhulu ukuthuthukiswa amagciwane ngentuba kanye pathogenic. Noma iluphi ushintsho ebaleni microflora lwesitho sangasese sowesifazane bendawo kuholela ekwakhekeni izifo ezifana colpitis edabukisayo.
Coleitis abesifazane - izici ungalokothi uphuze
· Ukusetshenziswa okuqhubekayo noma azilungile kwama-antibiotic.
· Ukwehluleka ukubona inhlanzeko yomuntu siqu.
· Ezithathelana STD.
· Ukwephulwa ohlelweni endocrine.
· Izifo okuvuthayo kwezitho zobulili.
· Komzimba nezinto zokuvimbela inzalo.
· Injury we mucosa lwesitho sangasese sowesifazane noma anomaly.
Uma coleitis isikhathi eside is hhayi ziphathwe, lokho kuyoholela Izifo ukuvuvukala kwesibeletho, wesibeletho kanye ezihlobene. Futhi lokhu kuyithuba okusongelayo inzalo, ukuguguleka komhlabathi, endometritis.
Coleitis ukuguguleka kungadalwa mycoplasma, chlamydia, streptococcus, Trichomonas, haemophilus influenzae, Staphylococcus namanye amagciwane. Kuye Isifo esibangelwa igciwane, colpitis zihlukaniswa hlobo.
Kuyini coleitis abukhali, Trichomonas, atrophic, candidiasis, futhi njengoba usibeka?
Acute - libhekene evutha, ubuhlungu, Ukulunywa ngaphakathi nangaphandle sangasese, noma ubovu uketshezi sukrovichnymi malodorous. Kuleli fomu ke zidinga ukwelashwa esiphuthumayo, ngaphandle kwalokho lesi sifo ingena esigabeni ezingamahlalakhona.
Trichomonas coleitis: kuyini? Izimpawu zayo: ubovu noma ezinkulu osenyameni aphuzi. ukucasuka Ngokuvamile enjalo belyami njalo kubangela ukuguguleka kwenhlabathi. Trichomonas vulvitis ngokuvamile iphenduka ibe esigabeni ezingamahlalakhona nge izimpawu kunalokho bakhathale.
Wanted kuyinto vulvitis ngesikhathi sokukhulelwa. Ngo-9% abesifazane abakhulelwe bathola lesi sifo, ngokuvamile ukuba bahlanganyele naye cystitis, urethritis, pyelitis. Trichomoniasis kwandisa ingozi isisu nokuguqulwa, intrauterine ukutheleleka fetus. Abakhulelwe babelwe ukwenza izinto ngendlela efanele ukwelashwa.
Kuyini coleitis Candida noma imbiliso? Lesi sifo okuthiwa in common - thrush. Libhekene ke frothy nokunjengoshizi noma amhlophe.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho coleitis nokuthi uluhlobo luni.
Yini inhlolovo uqhutshwa nalesi sifo?
luhlolo gynecological, udokotela uyaphawula ububomvu izindonga lwesitho sangasese sowesifazane kanye leucorrhoea luningi. Ithathwe smear ku bakposev flora exciter ngaleyo ndlela Kutholwe sokucasuka colpitis.
iyona isifo kanjani?
Uyephuza ukwelashwa akunakwenzeka kwasekuqaleni igciwane ofufusayo kungabangela eziningi izifo. Okwesibili, owesifazane ihlangabezana ukungakhululeki ngokwengqondo ngenxa ukulunywa njalo kokukhwehlela esindayo, kubonakala izinhlelo - kungaba isenzakalo esenzeka ngesikhathi esifanele ukubhekana kuya wezifo zabesifazane.
Uma vaginosis webhaktheriya inikezwa Yiqiniso kwamaphilisi lihambisana ukwelashwa wendawo: amakhandlela, izindlu zokugeza, izindlu tampons, douching. amakhambi Folk musa ayibulale. Amakhandlela angabelwa okuqukethwe kwama-antibiotic. udokotela kuphela angakunika umuthi ukwelapha ngakwesokudla ngemva kokuthola zonke assays.
Inkambo yokwelashwa cishe izinsuku ezingu-10, ngemva kwalokho-ke kuyodingeka futhi nginikeze ukuhlaziya isheke ku flora. Phakathi ukwelashwa ngemithi elwa namagciwane liyadingeka udede ekuhlanganyeleni ubulili notshwala.
Isifo Sokuqaqamba Kwamalunga - lokhu akulona umusho!
Indlela ukunquma isisindo sakho ekahle?
Sokuqonda ECG inhliziyo
Ihhotela Valsami Ihhotela Indawo 4 * (iGreece, Rhodes.): Incazelo, ukubuyekezwa
Ukudla dysbiosis emathunjini
GT Graphics ikhadi 430: Imininingwane
Kungani iphupho usaziwayo: Dream Incwadi
Okuthusayo - a amafilimu for onesibindi